Vonona hamaly ny amin’ny fanantenantsika
Tsy ampy ny fandalinantsika eo amin’ny fikatsahana ny fahamarinana. Hankeo amin’izay tsy maintsy hizarany ny anton’ny fanantenana ao anatiny ny fanahy rehetra izay mino ny fahamarinana ankehitriny; Hasaina hijoro eo anatrehan’ny mpanjaka , andriana, mpanapaka ary olo-malaza ety an-tany ny vahoakan’Andriamanitra ary tsy maintsy mahalala izay fantany mikasika ny fahamarinana izy ireo. Tsy maintsy lehilahy sy vehivavy miova fo izy ireo. Afaka mampianatra anao misimisy kokoa amin’ny fotoana iray Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fanahiny mihoatra lavitra amin’izay azonao hianarana amin’ny olo-malaza eto amin’izao tontolo izao; Mijery fatratra ny fifanandrinana mitranga eto an-tany izao rehetra izao. Tamin’ny sandany tsy misy fetra no nanomezan’Andriamanitra tombontsoa ny olona rehetra mba hahalala izay fomba hahazoany famonjena. Fahalianana manao ahoana re ny an’ireo anjely hijery hoe iza no hanararaotra izany tombontsoa izany e!
Rehefa tojo hafatra iray ny vahoakan’Andriamanitra dia tokony tsy hitsangana hanohitra izany izy ireo; tokony hankeo amin’ny Baiboly izy ireo, hampitaha izany amin’ny lalàna sy ny teny vavolombelona, koa raha tsy tafavoaka amin’izany fisedrana izany izy dia tsy mitombina. Irin’Andriamanitra ny hampivelatra ny saintsika. Iriny ny hametraka ny fahasoavany amintsika. Mety ho afaka hifaly amin’ny zava-tsoa maro isika isan’andro; satria azon’Andriamanitra sokafana ho antsika ny haren’ny lanitra rehetra; Tokony ho iray amin’i Kristy isika tahaka ny maha-iray Azy amin’ny Ray, ary ho tian’ny Ray isika tahaka ny itiavany ny zanany. Afaka ny hahazo fanampiana tahaka ny azon’i Kristy isika, afaka ny hahazo hery amin’ny olana rehetra koa; satria Andriamanitra no lohalalana sy vodilalantsika. SIM 1:415,416.